बीपी उद्यानको जग्गामा कंक्रिट संरचना बनाइएको भन्दै विरोध
July 13, 2021 सिम्रिक खबर No comments
२८ असार, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको घण्टाघर चोक नजिकै बीपी उद्यानको नाममा १० बिघा जग्गा छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पार्क, खुल्ला मञ्च, पार्किङ स्थल बनाउने लगायतको योजनासहित डिपिआर तयार गरिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको डिपिआर अनुसार नै शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पर्साले पार्किङ स्थल बनाइरहेको छ । असार मसान्तमा हतार हतार ढलान गराउँदा काम गुणस्तरीय नहुने एकातिर चिन्ता छ भने अर्कोतिर वीपी उद्यानको जग्गामा कंक्रिट संरचना बनाउनै नहुने भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
३ करोड २० लाखको ठेक्कामा काम भइरहेको छ । तर कार्यस्थलमा निर्माण कम्पनीले कामको बारेमा जानकारी दिने एउटा बोर्ड समेत लगएको छैन । वर्षायाममा काम गर्नुपर्दा कठिनाइसँगै काममा ढिलाइसमेत भइरहेको निर्माणमा खटिएका मजदुरको भनाइ छ ।
पार्क (उद्यान) बनाउने शर्तमा तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थानसँग वि.स. २०६० सालमा तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँमा १० बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । यातायात संस्थानको नाममा रहेको कित्ता नं. ११४, १४५, १४६, १, ३५, २२ र २९ नम्बरको जग्गा खरिद गरेको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकको ०६० कात्तिक २७ गतेको बैठकले उक्त जग्गा बेचबिखन हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने बीपी उद्यान बाहेक अन्य कुनैपनि प्रायोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । जग्गाको लालपूर्जामा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको बारेमा उल्लेख छ ।